သင်ျညမ်းဂိမ္း:မိသားစု Xxx ရာက္ဇာဂိမ္း
အရာအားမိသားစုသံုးေ? မြင်ချင်အရှိဆုံးအကြားဆက်သွယ်မှုသည်မိခင်၊သား၊သမီးနှင့်အဖေအစီအစဉ်? ကောင်းစွာကြီးစွာသောအရာသည်သင်ျညမ်းဂိမ်းများ၏ထွက်သည်ယခု၎င်း၏beta ကာလနှင့်အပြည့်အဝအသက်ရှင်ဖို့ကမ္ဘာကြီးအတွက်ပျော်မွေ့! ကျွန်တော်တို့အလုပ်လုပ်နေခဲ့ကြရတယ်အတော်လေးခဲယဉ်းနောက်ဆုံးနှစ်အနည်းငယ်အတူတကွထားရန်အမှန်တကယ်မယုံကြည်နိုင်လောက်ဒေတာဘေ့စဖို့ထင်သောကြောင့်သင်ပြမှကြွလာသောအခါမိသားစု-အာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေ့ဆုံခြင်း၊အကောင်းထက်အသင်းမှာပါ။, ကျနော်တို့နားလည်သဘောပေါက်မွတ္သားျခင္း၏သင်ျ:ကျွှန်တော်မှသင်ရသင်လိုချင်တာဘယ်မှာသွားနှင့်လက်ရှိအနေအများဆုံးအချို့တားမြစ်ထားပါတယ်အရေးယူကြောင်းသင်ဖြစ်နိုင်သည်။ နေစဉ်အချို့သောအခြားအစက်အပြောက်ထွက်ရှိသည်နိုင်အချို့သောကောင်းပြီ၊ခွဲပြီးခေါင်းစဉ်၊အကြောင်းအရာအားလုံးကိုထုတ်ဝေခဲ့သည်ပြီးမှရက်စွဲအပေါ်သင်ျညမ်းဂိမ်းအပြည့်အဝပြီးပြည့်စုံနှင့်အဆင်သင့်သင်ပျော်မွေ့ရန်အဘို့။ ကျနော်တို့တကယ်ယုံကြည်ကြောင်းထုတ်ကုန်ကျနော်တို့ကမ်းလှမ်းမှုကိုဖို့ရှိသည်အဝေးနှင့်ကျော်လွန်ဘာမှမသင်အရင်ကတွေ့ခဲ့ရပါတယ်၊ဒီတော့အဘယ်ကြောင့်မကိုယ့်ကိုကိုယ်အကြီးအကျယ်မျက်နှာမြင်ဖြစ်စေမကျနော်တို့ရရှိပါသည်သောအရာကိုတစ်ဦးဖြတ်အထက်ယှဉ်ပြိုင်မှု?, သင်သိအာရုံကိုကြိုးစားဖို့ကျွန်တော်တို့ကိုထွက်၊ဒါကြောင့်ရပ်တန့်အချိန်ဖြုန်းနှင့်အပေါ်ရရန်အတွက်အခုအချိန်မှာခံစားဖို့အကောင်းဆုံးသင်ျနစ်ဖျော်ဖြေရေးပတ်ပတ်လည်! သင်သည်လည်းဖတ်အောက်ချင်တယ်ဆိုရင်သင်ပိုမိုအသေးစိတ်အချက်အလက်အပေါ်အဘယ်အရာကိုကျွန်တော်တို့ကိုသွား-မှအစက်အပြောက် XXX စွဲနှင့်အတူတြက္ဆူမိသားစု။
တိုင်းဂိမ်းကျနော်တို့ကဒီမှာပတ်လည်မှာအာရုံစူးစိုက်သည်မိသားစုဝင်များစုတ်၊နှင့်ကျနော်တို့ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုတက်ဆောများလိင် ၁၁ တွက်တော်တော်အများကြီးရှိသမျှတစ်ခုတည်းကိုခေါင်းစဉ်အကြောင်းကျွန်တော်တို့ထုတ်ဝေ။ အခြားထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်ရှိသည်ပါဘူးအချို့သင်ျဂိမ်းများ၊သေချာ၊ဒါပေမယ့်သူတို့ကတိပေးသောသင်ရှိသမျှတစ်ခုတည်းကိုခေါင်းစဉ်တာပေါ့ဝန်မှတက်ဖြစ်သွားဖို့ကိုအနုမိခင်တွေ၊သမီးတွေ၊အဖေနှင့်သားသံုးေချင်းချင်းတယောက်ကိုတယောက်? ကျွန်ုပ်တို့သည်ကိုရှာဖွေကြောင်းယုံကြည်ဖို့ခဲယဉ်းအဘယ်ကြောင့်ဟူဖြစ်ပါသည်၊ကျနော်တို့အစစ်အမှန်ယုံကြည်ကြောင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီမှာအထူးပြုလုပ်ပြီးတစ်ခုမှာလူကြိုက်အစက်အပြောက်အဘို့အသွားကြောင်းလူသာအလိုအမျိုးအစားတစ်မျိုး။, အများကြီးဂိမ်းများရှိသည်မိုးသည်းထန်စွာအပေါ်အာရုံစူးစိုက်ကြံစည်မှုလွန်း၊ဒါကြောင့်ကျနော်တို့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ပါလိမ့်မယ်ကဇာတ်လမ်းများအတွက်သင်သေချာအောင်သင်လေးမြတ်တန်ဖိုးဘယ်လောက်ယုတ်နှင့်ဂုဏ်မိသားစုတွေ့ဆုံနိုင်။ ပါကငါတို့သည်လည်းရောနှောအတွက်စစ်မှန်သောသင်ျ(ကြံစည်မှု-ပညာရှိ)တွဲဆင့်မိသားစုအရေးယူ။ ကျွန်တော်တို့လိုချင်တာရဖို့နှစ်ဦးစလုံးကမ္ဘာ၏အကောင်းဆုံး၊ဒါပေမယ့်အားလုံးနီးပါးဂိမ်းများပေးစွမ်းဖို့ရွေးချယ်ချင်ရာတစျခုမှကိုးကားအတွက်ဂိမ်းများ။, ကျွန်မတို့ဟာပင်အနည်းငယ်သင်နိုင်ဝန်အတွက်အမျိုးမျိုးသော pornstars နှင့်ဆက်ဆံမောင်နှမကဲ့သို့သူတို့ကိုသို့မဟုတ်မိဘများသင်ချင်တယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုများအပြားအစက်အပြောက်အသိဘေးဖယ်ထံမှငါတို့ဥစ်စာလုပ်သောအကြောင်းအဖြစ်မှန်?
အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်ငါတို့သည်ငါတို့၏နယ်ပယ်ကောင်းကောင်းနှင့်အမှန်တကယ်အဖုံး၊ဒါကြောင့်အလုပ်တွေအများကြီးသဘောမျိုးအတွက်ကျွန်တော်တို့ကိုမဆိုသုံးဖြုန်းဖို့ပိုအချိန်ရစဉ်အတွင်းဖွံ့ဖြိုးရေးသေချာကြောင်းအဆိုပါဂိမ်းကျနော်တို့ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေကြည့်ရှုစိတ်ကူး။ ဒါကြောင့်ဖွင့်အထွေထွေအမြင်အာရုံဗေဒီအကြောင်းအရာတစ်ခုခုမယ်ဆိုတာကိုခင်ဗျားလုံးဝအားဖြင့်လွင်ပါ။ ကျနော်တို့အပြည့်အဝကိုကျူးလွန်ရန်အများဆုံးဆွဲဆောင်မှုအမြင်အာရုံပျော်စရာဂိမ်းများအကြောင်းကိုသင်နိုင်ပါလိမ့်မယ်ရှာတွေ့မှအင်တာနက်ပေါ်မှာအဘယ်အရာကိုမျှ–အတိုအမြင်အာရုံပြည့်စုံအောင်တော်၏နာမတော်သည်။, ကျွန်တော်တို့လည်းကြည့်ဖို့သေချာပါစေသောသူဂိမ်းချိတ်ဆက်ထက်လျော့နည်းအပေါ်ပြီးပြည့်စုံသောတူးဆဲပျော်မွေ့ဖော်ပြကျနော်တို့ကမ်းလှမ်းမှုကိုဖို့ရှိသည်၊ကိုသပ္ပါယ်အရည်အသွေးအင်ဂျင်ကို။ ဖြတ်ဖို့အချိန်ကြာမြင့်စွာကဇာတ်လမ်းအတို၊ဒီအမရှိမဖြစ်လိုအပ်ကြာသည့်နောက်ခံဒြပ်စင်များနှင့်သူတို့ကိုဖယ်ရှားဂိမ်းထဲကနေယီနေစဉ်သင့်စက်နိုင်ဆင်းအအေးနှင့်လုပ်ငန်းစဉ်များအားလုံး၏အချက်အလက်ဖွင့်ချပစ်ခံရမှာပါ။ ပြည်တွင်းဒေတာကြောင်းအကြံပြုခန့်သာ ၁၃%၏အသုံးပြုသူများအစဉ်အမြဲရှိသည်ဤအဂၤါသက်ဝင်၊ထို့ကြောင့်အဘို့အကျယ်ပြန့်အများစု၏သင်ျ-စွဲဂိမ်းကစား၊မဖြစ်သင့်ဘူးဆိုနှောက်၏ရုပ်ပုံလွှာစုံလင်သောမိသားစုစွန့်စား!
သင်သည်တတ်နိုင်အဖြစ်ကောင်းပြောပြ၊တူချစ်ခြင်းမေတ္တာ၌ပြိုလဲနှင့်သင်ျညမ်းဂိမ်းသိပ်မကြောက်ကြောင်းဝန်ခံရန်အဆုံးသတ်ရလဒ်၏အနှစ်၏အလုပ်ငါတို့သည်ထဲသို့သွင်းထားပြီးပါပြီဤနေရာရှိသည်အမှန်တကယ်ပြသချင်တယ်ဆိုရင်သင်အလွန်ကြီးစွာသောအိမ်ကဖုန်းဆက်ဖို့နေရာ၊သင်ပြုရန်ရှိသည်အားလုံးသည်ထုတ်လုပ်ရန်! ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဖွဲ့မှစီမံခန့်ခွဲခဲ့သည်ပါင္းစုံေျရာကိုကျွန်မစဉ်းစားခံရဖို့အကောင်းဆုံးညစ်ညမ်းဂိမ္းမော်ကွန်းတိုက်ပတ်လည်ဆိုရင်တစ်စုံတစ်ဦးသာဂရုစိုကျသင်ျ။, ကျွန်တော်တို့ရဲ့ချဉ်းကပ်မှုဖြစ်ပါတယ်၊ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အဂိမ်းများများမှာပကတိအပျော်အပါးကစားမှုနှင့်သင်မြင်ရပါလိမ့်မယ်အချိန်အတွက်အားလုံးမှာအထွေထွေမွာဒီနေရာမှာအပေါ်သင်ျညမ်းလည္းမတူဘဲဘာမှမသင်ဘယ်နေရာမှာမဆိုရှာဖွေအွန်လိုင်း။ ဒါကြောင့်အတူ၊အားလုံး၏စိတ်ထဲတွင်စဉ်းစားရန်အဆင်သင့်လာတဲ့အခါဖြစ်ပေါ်လာပူးပေါင်းပြီး? စာဖတ်ခြင်းများအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်–အခုလာရှုပ်ဖို့အကောင်းဆုံးသင်ျလိင်ဂိမ်းများလိမ့်မယ်အစဉ်အမြဲရှာဖွေအပေါ်။